‘महिला हिरो’ खोज्दै मझुवाबेंसी - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘महिला हिरो’ खोज्दै मझुवाबेंसी
'नेपाललाई पछिल्लो ४० वर्षयता अध्ययनको केन्द्रमा राखिरहँदा र महिला साधकहरू योगमाया–दुर्गादेवीका बारेमा अरूको चासो रहिरहेको देख्दा मलाई इतिहासको यो पाटोमा अझै शोध गर्न सकिने विषय बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ  ।'
पुस १८, २०७७ देवेन्द्र भट्टराई
उमेर हिसाबमा बारबरा निमरी अजिज ८० वर्ष लागिन् । तर, उनको निरन्तरको पत्रकारिता कर्म र मानवशास्त्रीय शोधखोज भने अझै तन्नेरीझैं छ । अमेरिकाको न्युयोर्कवासी अजिज ‘रेडियो ताहिर’ नामको वेबसाइट रेडियो पनि चलाउँछिन्, जहाँ बढीजसो अरबी जगत्‌का समस्या र सरोकारलाई उनी उठाउने गर्छिन् ।
फुलब्राइट प्रोफेसरका रुपमा सन् २००७ देखि झन्डै २ वर्ष अल्जेरियामा प्राध्यापनमा खटिएकी उनी केही वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनाससम्बद्ध स्कलर पनि रहिन् ।
क्यानडाको ओन्टारियामा सन् १९४० मा जन्मेकी बारबराले युनिभसिर्टी अफ लन्डनबाट मानवशास्त्रमा पीएचडी गरेकी छन् । हालै काठमाडौंको मण्डला बुक्स प्वाइन्टबाट उनको ‘योगमाया एन्ड दुर्गादेवी : रेबेल वुमन अफ नेपाल’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशित छ ।योगमाया र दुर्गादेवीजस्ता नेपाली महिला पात्रहरूको विद्रोही इतिहासमा उनको रुचिबारे देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
तपाईंले योगमाया र दुर्गादेवीजस्ता नेपाली महिला पात्रहरूको विद्रोही इतिहासमा किन रुचि राख्नुभएको हो ? यसमा मुख्य के कारण थियो ?
यसमा आफ्नै कारण र पृष्ठभूमि लुकेको छ । मेरो बाल्यकाल, प्राथमिक शिक्षाको चरण क्यानडा र बेलायतमा बितेको हो । म सानैदेखि आफ्ना पुस्तकमा समाजका हिरो (नायक) का बारेमा खोजी गरिरहेको हुन्थेँ, अचेतन मनमै त्यस्ता ‘हिरो’ पुरुष मात्रै भएकोमा अचम्मित पनि हुन्थेँ । स्कुलका पुस्तकदेखि बाहिरी मिडियासम्म पनि ‘पुरुष नायक’ हरू मात्रै भेटिन्थे । यो पुरुष–प्रधानताको स्थिति एसियन, अफ्रिकन र अरब समाज तथा त्यहाँको इतिहासमा अझ बढी पाइन्थ्यो, पाइन्छ । ठीक यही बेला, एसियन, अफ्रिकन र अरब जगत्‌मा महिला भनेको सधैं परनिर्भर र सीमान्तकृत झैं देखाइएको हुन्थ्यो । समाज निर्माणको इतिहासमा जोडिएका थुप्रै महिलाको योगदान र बलिदानी सधैं ओझेलमा हुन्थ्यो ।
निकै पछि सन् १९७० मा युरोपमा सुरु भएको नारीवादी अभियानले ‘महिला नायक’ (वुमन हिरो) लाई समेत बाहिरतिर ल्यायो, समाजका महिला नायक चिनाउन थाल्यो । अझै पनि युरोप बाहिरको जगत्मा महिलाहरू पीडित र प्रताडित रूपमै चिनिदै थिए । सन् १९९० को दशकमा संसारभर लैंगिकमैत्री गैरसरकारी संघ–संगठनहरूको उदय यही कारण भएको थियो, जसका कारण समाजमा पुरुषसरह महिलाको भूमिका रहेको छ भन्ने खोजीनिती सुरु भयो ।
यो पृष्ठभूमिभन्दा पर्तिर म आफ्नै कुरो गर्दा मैले आफू ४० वर्ष जति उमेरमा पुगेपछि मात्रै यो ‘बायसनेस’ का बारेमा गहिरिएर थाहा पाएँ । मानवशास्त्रको अध्ययन रुचिको क्रम बढ्दै गएपछि मैले पनि इतिहासको पर्दामा छोपिएर बसेका वीर, साहसी र अग्रगामी महिलाबारे शोधखोज थालेकी हुँ । संयोगले त्यही क्रममा मैले आफ्नो शोधमा तिबेतियन, नेपाली र अरबी समाजको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको साहित्य र सभ्यताका खुराकहरू पर्गेल्न थालेकी थिएँ । यही रुचि र स्वअध्ययनले मलाई नेपालका पारिजात, योगमाया र दुर्गादेवीसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो ।
लेखक नीलम कार्की ‘निहारिका’ ले ‘योगमाया’ पात्रको केन्द्रमा रहेर लेखेको उपन्यासले मदन पुरस्कार पाइसकेको छ । धेरैपछि थाहा भयो, नीलमलाई यो लेखन चेतनामा बल दिने तपाईं हुनुहुँदोरहेछ । आफू भने शोध–अनुसन्धानको कुरामा किन ‘साइडलाइन’ हुनुभयो ?
लेखक नीलम कार्की स्वयं योगमायाको जीवन र इतिहासबाट अत्यधिक प्रभावित हुनुभएको हो । नीलमको शोधखोजप्रति मेरो गहिरो सम्मान छ, आदर छ । नेपालको ऐतिहासिक र लुप्त विषयमाथि नीलमको रुचि तथा भोजपुरसम्मको स्थलगत अध्ययनले इतिहासमा कहीँकतै हराइरहेकी योगमाया न्यौपाने नामकी एक जना साधक महिलाको नामकाम बाहिर आउन सकेको छ । एउटा ऐतिहासिक रूखो विषयमा साहित्यिक सुगन्ध र केही स्वैरकल्पना भरेर उनले ल्याएको ‘योगमाया’ उपन्यास आफैंमा अनुपम छ ।
योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको १ सय वर्षअघिको त्यो इतिहासलाई नेपाली प्राज्ञिक र अनुसन्धानदाताको वृत्तमा यसरी चिनाउन सक्नु आफैंमा अनुकरणको कुरा हो । मलाई मेरो जीवनका अघिल्ला वर्षहरूमा पारिजात र पछिल्लो समयमा नीलम कार्की ‘निहारिका’ ले अन्तस्करणदेखि प्रभावित गरेका छन् । यति भनेर, साधक योगमायामाथिका मेरा अघिल्ला रिपोर्टहरू ‘साइडलाइन’ मा पर्नुका कारण पनि म बताउन चाहन्छु ।
मूलतः सरकारी नीतिमै योगमायाको योगदान र इतिहासलाई दमन गर्न चाहने नियत लुकेको थियो । अझ राणाकालमा त योगमाया भन्नासाथ विद्रोही र सत्ताका विरुद्ध धावा बोल्ने पात्रका रूपमा उभ्याइएको थियो । अर्कातिर, योगमायाकै बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सिनासले सन् २००१ मा निकालेको मेरो पुस्तक नै सार्वजनिक बिक्री–वितरणमा गयो, न यसबारे चर्चा गरियो । त्यसअघि, सन् १९८१ यता म आफूले गरेको अनुसन्धान र दुर्गम पहाडका अशिक्षित तथा गरिब भक्तिनीहरूले जगाएको चेतनाको दियोका बारे मैले विभिन्न माध्यमबाट बाहिर ल्याउन थालेकी थिएँ । तैपनि त्यो सूचना मात्रै सबैका निम्ति काफी थिएन, रहेन ।
तपाईंले आफ्ना कतिपय जर्नल, साहित्यिक लेखमा पारिजात, सुकन्याको नाम धेरैपटक लिनुभएको छ । यी नेपाली समाजका अभियन्ता पात्रबाट तपाईंले के प्रेरणा पाउनुभएको थियो ?
आदरणीय पारिजात र सुकन्याजस्ता वैचारिक रूपमा स्पष्ट तथा अनुभवी दुई महिलालाई नभेटिन्जेलसम्म म नेपालको राजनीतिक–सामाजिक धरातलबारेमा शून्य जानकार थिएँ, नेपाल आइरहने अरू धेरै विदेशी अनुसन्धानकर्मीजस्तै । धेरैजसो मानवशास्त्रीहरू अक्सर नेपाली राजनीति र त्यसमा पनि विवादास्पद लाग्ने राजनीतिक पात्रहरूबाट टाढै बस्न रुचाउँछन् ।
सुरुमा त पारिजातले मलाई नेपालको शाही शासनले उनी र उनीजस्ता कतिपय विचारक साथीभाइलाई सधैंसधैं दुःख दिइरहेको बताउने गर्थिन् । उनले नेपाली युवा जमातलाई अधिक प्रभावित गर्ने गरेको म आफैंले प्रत्यक्ष देखेकी थिएँ । उनका कवितामा पनि योगमायाका ‘हजूरवाणी’ समेटिएका हुन्थे । उनै पारजातले मलाई योगमायालाई ‘राजनीतिक विद्रोही’ (फेलो पोलिटिकल रेबेल) का रूपमा चिनाएकी थिइन् । पछि पारिजात र डा. हर्क गुरुङले मलाई मेरो अनुसन्धानमा अग्रसर हुने थप प्रेरणा दिएका थिए, यही कारण म मनकामना (संखुवासभा) र मझुवाबेंसी (भोजपुर) मा गएर भक्तिनी आमाहरूसँग बसेकी थिएँ ।
योगमाया बारेमा अध्ययन गर्न संखुवासभा, भोजपुर भ्रमणमा कत्तिको जानुभएको थियो ? योगमायाको जीवन र कर्मबारे के कुरा बाहिर आउन बाँकी छजस्तो लाग्छ ?
सन् १९८० पछि लगातार ५ वर्षजति वर्षमा एक–डेढ महिनाका हिसाबमा अथवा कहिलेकाहीं वर्षमा २ पटक म पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू पुगिरहेकी हुन्थेँ । सोलुखुम्बुमा भने सन् १९६९–७० मा म बसेकी थिएँ, त्यसपछिका वर्षमा तेह्रथुममा पनि रहेँ । त्यसबेला नेपाली गाउँघरमा बस्न र निश्चल स्वभावका गाउँलेसँग उठबस गर्न निकै आनन्दको समय थियो, सुरक्षित पनि । सन् २००२ र २०१९ मा पनि संखुवासभा र भोजपुर भ्रमणमा निस्किएकी थिएँ । मैले मजुवाबेंसी र गौरेनी गुफामा निकै परिवर्तनहरू देख्न पाएँ, यी दुवै ठाउँ सन् ८० को दशकमा पूरै रित्तिएका थिए ।
नेपाललाई पछिल्लो ४० वर्षयता अध्ययनको केन्द्रमा राखिरहँदा र यी महिला साधकहरू (योगमाया–दुर्गादेवी) का बारेमा अरूको चासो रहिरहेको देख्दा मलाई इतिहासको यो पाटोमा अझै शोध गर्न सकिने विषय बाँकी रहेकोजस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा योगमायालाई पक्राउ गरिँदाको अदालती अभिलेख, मृत्यु (आत्मदाह) बारेको शोध र नेपालमा राजनीतिक अभियान थाल्नुअघि युवा उमेरमा भारत प्रवासमा बस्दाको इतिहासमाथि पनि शोध हुन बाँकी छ । अर्कातिर, दुर्गादेवीकै पनि अदालती अभिलेख खोजी भएको छैन । दुर्गादेवीका श्रीमान्तर्फका आफन्तहरूले अझै पनि उनलाई सम्झिरहेका हुन्छन् । मैले तीमध्ये केहीलाई केही वर्षअघि खाँदबारी नजिकै मार्वा भन्ने ठाउँमा भेटेकी थिएँ ।
अहिले पनि राजनीतिक चेतना र विद्रोहका कुरा हुन्छन् । योगमायाले गरेको विद्रोह र पछिल्लो विद्रोह (महिला आन्दोलन) मा के तात्विक अन्तर भेट्नुभयो ?
योगमायाको समय, काम र दृष्टि निकै फरक थियो, अहिले हुने विद्रोहसाग अतुलनीय खालको । यो अन्तरका बारेमा मैले निकै समय दिमाग खियाएकी छु । योगमाया न्यौपाने मात्रै होइन, दुर्गादेवी कार्की घिमिरेका बारेमा पनि मैले त्यो समय र संघर्षको इतिहासलाई सामान्य मानेकी छैन जसबारे मैले आफ्नो यो पुस्तक (योगमाया एण्ड दुर्गादेवी : रेबेल वुमन अफ नेपाल)मा उल्लेख गरेकी छु । मैले यो पुस्तकमा यी दुई विद्रोही महिलाका बारेमा र उनीहरुले त्यसबेला उठाएको लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारसँगको आजको सान्दर्भिकतालाई जोडेकी छु ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७७ १०:४५
भीमसेन–जंगबहादुर : को विभूति, को क्रूर ?
राष्ट्रिय सीमा बढाउने पात्रप्रति राष्ट्रले गौरव गर्छ । तर, यो नियम भीमसेन र जंगबहादुरको हकमा लागू भएको छैन । नत्र राष्ट्रको एकतिहाइ भूमि गुमाउने भीमसेन राष्ट्रिय विभूति घोषित हुने र पश्चिम तराईका चार जिल्ला पुनः नेपालमा गाभ्ने जंगबहादुरचाहिँ क्रूर कहलिने थिएनन् ।
पुस ११, २०७७ सुजित मैनाली
नेपालको इतिहासमा भीमसेन थापा (विसं १८३२–१८९६) लाई नायक र जंगबहादुर राणा (विसं १८७४–१९३३) लाई खलनायकका रूपमा चित्रण गरिएको छ । इतिहाससम्बन्धी आम बुझाइ तथ्यमा मात्र आधारित हुँदैन । शासन व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र तीसँग गाँसिएको अर्थराजनीतिले पनि इतिहाससम्बन्धी आम दृष्टिकोणलाई आकार दिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले इतिहासका तथ्यसँगै इतिहास लेखनको अर्थराजनीतिक धरातललाई पनि उधिन्न सकियो भने इतिहास लेखनको पृष्ठभूमिले ओझेल पारेका तथ्यहरूसमेतको आलोकमा विगतको समग्र चित्र कोर्न सकिन्छ ।
भीमसेन थापा र जंगबहादुर राणा दुवै जना नेपालको इतिहासका चर्चित पात्र हुन् । उनीहरूको व्यक्तित्वमा अनेक भिन्नतासँगै समानता पनि छन् । दुवै जनाले आफ्नो समयको अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थिरता दिएका थिए । दुवै जना आ–आफ्ना पालामा राजाभन्दा सामर्थ्यवान थिए ।
पृथ्वीनारायण शाह (विसं १७७९–१८३१) को अवसानसँगै नेपाली राजनीति अस्थिरतामा रुमल्लिन पुग्यो । त्यही अस्थिरताका बीच उनका पुत्र बहादुर शाह (विसं १८१४–१८५४) र नाति रणबहादुर शाह विसं १८३२–१८६३) को पतन भयो । रणबहादुरको हत्यापछि पृथ्वीनारायणका नाबालक पनाति गीवार्णयुद्धविक्रमबाहेक राजकाजमा सक्रिय उनका सबै सन्तति मारिए । राजनीतिक अस्थिरता र योसँग गाँसिएको रक्तरञ्जित कलहका बीच नेपालको शासनसत्तामा भीमसेनको उदय भयो । उनले तीन दशकसम्म शासनसत्तालाई स्थिर तुल्याए ।
भीमसेनको सामर्थ्य नायबी सम्हालिरहेकी रणबहादुरकी विधवा ललितत्रिपुरसुन्दरीमा अडिएको थियो । ललितत्रिपुरसुन्दरीको मृत्युपछि भीमसेनको पतनको शृङ्खला आरम्भ भयो । उनलाई बन्दी बनाई सेरिएर मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो । उनको शवलाई सद्गतिसम्म गर्न नदिई विष्णुमतीको किनारमा फ्याँकेर स्याल, कुकुर, गिद्द आदिबाट लुछाइयो ।
भीमसेनको अन्त्यसँगै शासनसत्तामा अस्थिरताको अर्को शृङ्खला सुरु भयो । यही अस्थिरताको शृङ्खलामा परी भीमसेनका भतिजा मुख्तियार माथबरसिंह थापा (विसं १८५५–१९०२) देखि अर्का मुख्तियार फत्यजंग शाह (विसं १८६२–१९०३) सम्म मारिए । यसै अस्थिरताका बीच शासनसत्तामा जंगबहादुरको उदय भयो ।
विसं २००७ मा राणाशाही अन्त्य भएपछि नेपालमा इतिहास लेखन परम्पराले गति लियो । विभिन्न कोणबाट इतिहासका घटना र पात्रहरूको विवेचना गर्ने क्रम सुरु भयो । यही मेसोमा भीमसेन र जंगबहादुरबारे लेखरचनाहरू धमाधम लेखिन थाले । तीमध्ये अधिकांश रचना अर्थराजनीतिक प्रभावबाट अछुतो थिएनन् । चित्तरञ्जन नेपालीले विसं २०१३ मा ‘जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल’ शीर्षकको किताब लेखे । किताबको ‘प्राक्कथन’ मा उनले ‘राष्ट्रिय इतिहासको सृजनामा उत्सुकतासहित प्रोत्साहनपूर्ण सहानुभूति राखिबक्सकेकोमा सर्वप्रथम श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवका हजुरमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु’ भनेका छन् । किताब छाप्न उनलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रको छायामुनि बसेर चित्तरञ्जनले भीमसेनप्रति सम्यक् दृष्टिकोण बनाउन सकेनन् । महेन्द्रका पुर्खा रणबहादुर र भीमसेन एउटै खेमाका राजनीतिज्ञ भएकाले भीमसेनको तारिफ गर्दा रणबहादुरको समेत तारिफ हुने र भीमसेनको आलोचना गर्दा रणबहादुरसमेत आलोचित हुने अवस्था थियो । त्यसैले उनले रणबहादुर र भीमसेनले बनारसमा बसेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठमाडौंप्रति दबाब सिर्जना गर्न सहज तुल्याएको र बनारसबाट फर्किएर काठमाडौंमा नृशंस हत्याको शृङ्खला चलाएको सन्दर्भलाई पनि औचित्यपूर्ण ठहर्‍याए । यस्तैखालको विचारलाई निरन्तरता दिँदै त्यसको सात वर्षपछि विसं २०२० मा उनले ‘श्री ५ रणबहादुर शाह’ शीर्षकको अर्को किताब प्रकाशित गरे । भीमसेनसम्बन्धी चित्तरञ्जनको किताब पूर्वाग्राही छ भनी आलोचना पनि भयो । नयराज पन्तले ‘अन्धभक्ति र अन्धद्वेष गर्ने परम्परा चलाउने काम इतिहासकारको होइन’ भन्दै भीमसेनप्रति चित्तरञ्जनले अन्धभक्ति गरेको आक्षेप लगाए ।
भीमसेनप्रति अन्धभक्ति राख्ने धारविरुद्ध बाबुराम आचार्यले अन्धद्वेषपूर्ण लेखनको अर्को धार चलाए । भीमसेनलाई खलनायक देखाउने गरी उनले विभिन्न लेख लेखे । तर, तत्कालीन सत्ताले आचार्यको धारलाई नस्विकारी चित्तरञ्जनकै धारलाई अनुमोदन गर्‍यो । भीमसेन राष्ट्रिय विभूति बनाइए ।
विसं २००७ पछिको इतिहास लेखन परम्परा जंगबहादुरको हकमा चाहिँ अनुदार रह्यो । त्यतिबेला राणाशाही भर्खरै ढलेको थियो । राणाशाहीविरोधी मानसिकता चौतर्फी व्याप्त थियो । त्यस अवधिमा इतिहाससम्बन्धी काम गर्ने प्रायः सबै जना या त राणाशाहीविरोधी आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, या त उनीहरू राणाशाहीविरोधी नेताका पथगामी थिए । त्यसको प्रभाव राणाशासनसम्बन्धी उनीहरूका लेखनमा पर्‍यो । उदाहरणका लागि एलएस बरालले लियो ई. रोजको किताब ‘नेपाल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ को समीक्षा गर्ने क्रममा लेखेको निम्न वाक्यलाई लिन सकिन्छ, ‘उनले (रोजले) देशलाई तीस–तीस वर्षसम्म त्यति धेरै शोषण र दमन गरेका राणा प्रधानमन्त्रीहरू जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरको भरमार तारिफ गरेका छन्, जुन कुराले नेपालीलाई बढ्तै खिन्न बनाउन सक्छ ।’ यसो भनेर बरालले जंगबहादुर र चन्द्रशमशेर (विसं १९२०–१९८६) प्रति रोजको दृष्टिकोण तथ्यसंगत छ/छैन भनी विवेचना गर्ने झन्झटबाट आफूलाई मुक्त गराएका छन् ।
अहिले शाहकाल समाप्त भएर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । राणाशाहीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने पुस्ता राष्ट्रिय मूलधारबाट पन्छिसकेको छ । यस अर्थमा भीमसेन र जंगबहादुरको विवेचना गर्ने उपयुक्त समय बल्ल सुरु भएको छ ।
कोतपर्व भन्नासाथ सत्ताप्राप्तिका लागि गरिएको बर्बर हत्या शृङ्खलाको चित्र हाम्रो मनसपटलमा निर्मित हुन्छ । इतिहासमा भारदारी षड्यन्त्रको पटाक्षेप जंगबहादुरको समयमा घटित कोतपर्वमा भयो र त्यसपछि नेपाल अँध्यारो युगमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने आमधारणा नेपालमा व्याप्त छ ।
कोतपर्वपछि अँध्यारो युग सुरु भयो भनी दाबी गर्न त्यसभन्दा पहिलेको युग उज्यालो थियो भनी सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन । नृशंस राजनीति, भारदारहरूले आफू र आफ्नो वंशकेन्द्रित भएर गर्ने व्यवहार, कला र विज्ञानप्रतिको उदासीनता आदि कोतपर्वअघि पनि उस्तै थियो ।
यही सन्दर्भमा भीमसेन र जंगबहादुरले प्रदर्शन गरेको नृशंसताको तुलना गर्न सकिन्छ । सामान्यतः जंगबहादुरलाई भीमसेनभन्दा बढ्ता क्रूर मानिन्छ । तर, तथ्यले अर्कै भन्छ । गगनसिंहलाई समेत गन्ने हो भने जंगबहादुरले मच्चाएको कोतपर्वमा ३२ जना मारिएका थिए । सानो वरीयताका सिपाहीहरूलाई पनि गन्दा करिब ४० जनाको हताहती भएको थियो । त्यस घटनामा फत्यजंग शाह, गगनसिंह र अभिमानसिंह रानाजस्ता प्रभावशाली भारदारहरूको हत्या भएपछि देशको सर्वेसर्वा बन्न जंगबहादुरलाई सजिलो भयो । भण्डारखालपर्वमा थप १३ जना विरोधी भारदार र सैनिकहरूको हत्या भएपछि राजकाजमा जंगबहादुरको प्रभाव अझ बढ्यो । उनी राजाभन्दा शक्तिशाली बने । शासनसत्तामा स्थिर हुन जंगबहादुरले कोतपर्व र भण्डारखालपर्वमा गरी करिब ५३ जनाको हत्या गरे ।
भीमसेनको सत्तारोहण अझ बढी क्रूर थियो । रणबहादुरले बरसमा निर्वासित जीवन बिताइरहँदा भीमसेन उनका प्रमुख सहयोगी थिए । त्यतिबेला काठमाडौंमा राजा गीवार्णयुद्धविक्रमको नाममा नायबी चलाइरहेकी रणबहादुरपत्नी राजराजेश्वरीले दामोदर पाँडेसँग मिलेर रणबहादुरलाई काठमाडौं आउन दिइरहेकी थिइनन् । रणबहादुरले अन्ततः बलजफ्ती नेपाल आएर विरोधी भारदारहरूको हत्या शृङ्खला चलाए । दामोदार पाँडे, भीम खवास, इन्द्रमान खत्री, रणकेशर पाँडे, गजकेशर पाँडे आदिको हत्या गरियो । भीम खवासका एक जना छोरोलाई उँधोमुन्टो गरी झुन्ड्याइयो । अर्का छोरोको आँखा झिकियो । रणबहादुरका विश्वासिला भारदार भएको नाताले त्यस हत्या शृङ्खलामा भीमसेनको पनि हिस्सेदारी थियो ।
त्रिभुवन प्रधानको घरमा बसेको भारदारहरूको कचहरीमा शेरबहादुर शाहले आफ्ना सौतेनी दाजु रणबहादुरमाथि तरबार चलाउँदा रणबहादुरको मृत्यु भयो । रणबहादुरको अंगरक्षक रहेका जंगबहादुरका पिता बालनरसिंह कुँवरको प्रहारबाट शेरबहादुरको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भयो । त्यतिबेला राजा गीवार्णयुद्धविक्रम नाबालक थिए । त्यही मौका छोपी भीमसेनले रणबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोप लगाएर विरोधी भारदारहरूको सफाया गरे । त्यस घटनालाई इतिहासमा पहिलो भण्डारखालपर्व भनिन्छ ।
पहिलो भण्डारखालपर्व कोतपर्वभन्दा बढी नृशंस थियो । रणबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्रमा सरिक भएको आरोप लगाई भीमसेनले रणबहादुरका सौतेनी भाइ विदुर शाह, नरसिंह गुरुङ, त्रिभुवन प्रधान आदिको हत्या गराए । शेरबहादुर, विदुर, त्रिभुवन र नरसिंहका दुई वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका छोराछारीहरूको पनि उनले हत्या गराए भनी गीवार्णयुद्धविक्रमको राज्यकालपछि तयार पारिएको एउटा लेखोटमा उल्लेख छ । भीमसेनले सत्ताप्राप्तिका लागि स्त्रीहरूको पनि हत्या गराए । रणबहादुर मारिँदा उनकी जेठी पत्नी राजराजेश्वरी हेलम्बुमा लखेटिएकी थिइन् । रणबहादुर नरहेको अवस्थामा उनले काठमाडौं आएर पुनः नायबी सम्हाल्लिन् भन्ने भय भीमसेनलाई भयो । भीमसेनका विरोधी पाँडे खलकसँग राजराजेश्वरी निकट थिइन् । त्यस्तो भयबाट मुक्त हुन भीमसेनले रणबहादुरको दाहसंस्कार भएको एक सातापछि १४ जना कमारीसहित राजराजेश्वरीलाई जबरजस्ती सती पठाएर मारे । कुल ९३ जनाको हत्या गरेपछि शासनसत्तामा उनी स्थिर भए । मृतकको संख्या र हिंसाको सघनतालाई आधार मान्ने हो भने जंगबहादुरभन्दा भीमसेनको सत्तारोहण बढी हिंस्रक थियो ।
शासनसत्तामा आएपछि भीमसेन र जंगबहादुरले गरेका कामहरूको मूल्यांकन गर्दा त्यतिबेलाकै मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेलाको चलनलाई निरन्तरता दिँदै दुवैले विरोधी खेमालाई शक्तिहीन बनाई जहानियाँ शासन सुरु गरे । राष्ट्रिय भूमि र कोषलाई दुवैले बपौतीसरह बनाए । दुवैले राजालाई आलंकारिक हैसियतमा सीमित गरिदिए । त्यतिबेला उनीहरूको ठाउँमा अर्को कुनै भारदार थिए भने तिनले पनि त्यसै गर्ने थिए ।
इतिहासका पत्रहरूको विवेचना गर्दा उनीहरूको कर्मलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । राजनीतिमा खलपात्र ठहरिएको इतिहासको अमुक पात्र अर्थतन्त्र, विकास अथवा कूटनीतिमा अब्बल हुन पनि सक्छ । भीमसेन र जंगबहादुरले पनि देशको स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए । अंग्रेजसँग युद्धमा पराजित भएपछि काठमाडौंमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको रेसिडेन्सी स्थापना भयो । भीमसेनले रेसिडेन्सीलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिने र कम्पनी सरकारसँग विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न एकसाथ गरे । अंग्रेजसँगको सम्बन्ध र काठमाडौंमा त्यतिबेला व्यप्त अंग्रेजविरोधी मानसिकतालाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौतीमाझ उनी चेपिएका थिए ।
सुगौली सन्धि हुनुअघि सन्धिको मस्यौदामा नेपाललाई तराईरहित गर्ने बुँदा उल्लेख थियो । तराईको उर्वर भूमिबिना नेपाल लामो समय टिक्न सक्दैन भन्ने महसुस भीमसेनले गरेका थिए । अन्ततः तराईका केही भू–भागसमेत नेपालमा रहने गरी अंग्रेजसँग सन्धि गर्न उनी सफल भए ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनकै पालामा सुगौली सन्धिबाट नेपालले करिब एकतिहाइ भूमि गुमायो । अंग्रेजसँग विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउन पनि उनी चुके । बेलायती राजाको नाममा नेपाली राजाले पठाएको सौगातसहित भतिजा माथवरसिंह थापालाई लन्डन पठाउन उनले चाहेका थिए । त्यसो गरेर अंग्रेजसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने देखाई खस्किँदै गएको आफ्नो प्रभावलाई उकास्ने योजना उनले बनाएका थिए । तर, अंग्रेजहरूले माथवरसिंहलाई कलकत्ताबाटै फर्काइदिए । त्यस घटनापछि भीमसेनको साख गिर्‍यो र उनको पतन भयो ।
भीमसेनको राजकीय क्षमताका कतिपय सीमालाई जंगबहादुरले उछिनिदिए । राष्ट्रिय सीमा बढाउने पात्रप्रति राष्ट्रले गौरव गर्छ । तर, यो नियम भीमसेन र जंगबहादुरको हकमा लागू भएको छैन । नत्र राष्ट्रको एकतिहाइ भूमि गुमाउने भीमसेन राष्ट्रिय विभूति घोषित हुने र पश्चिम तराईका चार जिल्ला पुनः नेपालमा गाभ्ने जंगबहादुरचाहिँ क्रूर कहलिने थिएनन् । भूमि पुनः प्राप्त गर्ने गरी अंग्रेजसँग विश्वासिलो सम्बन्ध बनाउने जंगबहादुरको कूटनीतिक कौशल भीमसेनको भन्दा अब्बल थियो । नेपाली कूटनीतिक टोलीलाई युरोपसम्म पुर्‍याउने भीमसेनको चाहनालाई जंगबहादुरले अन्ततः सफल तुल्याए । राजाका अधिकारसम्पन्न दूतको हैसियतले उनले बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गरी नेपालको कूटनीतिलाई फराकिलो बनाए । भीमसेनले नेपालको विदेश नीतिलाई स्थिर तुल्याउन सकेनन् । सुगौली सन्धिपछि पनि अंग्रेजविरुद्ध चीन र भारतका केही राज्यसँग गठजोड गर्ने प्रयत्न उनले गरिरहे ।
कूटनीति र सुरक्षासम्बन्धी मामिलामा समयको सूक्ष्म पदचाप बुझ्ने सवालमा जंगबहादुरले भीमसेनलाई उछिने । पहिलो अफिम युद्धमा अंग्रेजसँग चीन पराजित भएपछि एसियाको शक्ति समीकरण अंग्रेजको पक्षमा छ भन्ने कुरा जंगबहादुरले महसुस गरे । युरोप भ्रमण गरेर विश्व शक्ति समीकरण पनि अंग्रेजकै पक्षमा रहेको निष्कर्ष निकाले । त्यसपछि उनले बाह्य मामिलामा अंग्रेजसँग सहकार्य गर्ने तर आन्तरिक मामिलामा उनीहरूलाई ढिम्किन नदिने नीति लिए । त्यही नीतिअन्तर्गत सडक सञ्जालमार्फत काठमाडौंलाई भारतसँग जोडी दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सघन बनाउने अंग्रेजहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । अंग्रेजसँगको व्यापारिक अन्तरक्रिया जनस्तरमै सघन भएकाले भारतीय राज्यहरू अंग्रेजको उपनिवेश बनेका हुन् भन्ने उनको बुझाइ थियो । उनको त्यस्तो बुझाइ देशको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्ने सवालमा एक हदसम्म उपयोगी सिद्ध भए पनि देशको आर्थिक हितमा चाहिँ यसले नराम्रो असर गर्‍यो ।
भीमसेन र जंगबहादुरबीच तुलना गर्दै गर्दा जंगबहादुरले भीमसेनको जस्तो विषम परिस्थितिको सामना गर्नु नपरेको कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । परिवेश र व्यक्तिको अग्रसरता दुवैबाट परिस्थिति निस्पन्न हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपाल–अंग्रेज युद्धको प्रमुख कारक भीमसेन थिएनन् । उत्तर भारतमा फैलिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसको पहाडी भेगमा फैलिरहेको नेपालबीच झडप हुनु त्यतिबेला अपेक्षित नै थियो ।
जंगबहादुरले परिस्थितिलाई विषम बन्न नदिने कौशल देखाए । यदि सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा उनले विद्रोहीहरूलाई समर्थन गरेका भए नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी पुनः एकपटक आमनेसामने हुने थिए । नेपालका अधिकांश भारदारको राय विद्रोहीहरूको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, शक्तिको तुला अंग्रेजहरूकै पक्षमा ढल्किएको छ भनी बुझेका जंगबहादुरले कम्पनी सरकारलाई सहयोग गर्ने निधो गरे । त्यतिबेला दार्जिलिङमा रहेका ब्रायन हज्सन (सन् १८००–१८९४) लाई प्रयोग गरी उनले कम्पनी सरकारलाई विद्रोहीहरूको दमन गर्न नेपालले दिने सैन्य सहायता स्वीकार गर्न मनाए । संकटको घडीमा नेपालले गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञ भएर अंग्रेजहरूले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फर्काए । नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध विश्वासिलो बन्यो ।
भीमसेनका कतिपय कमीकमजोरीहरूबाट सिक्ने मौका जंगबहादुरलाई मिलेको थियो । भीमसेनको पतनलाई उनले नियाल्न पाएका थिए । आफ्नो नियति पनि भीमसेनको जस्तो नहोस् भनेर उनले आफू र आफ्नो परिवारलाई कानुनभन्दा माथि पारे । विसं १९०५ वैशाख सुदी १३ मा राजा सुरेन्द्रविक्रमलाई लालमोहर जारी गर्न लगाएर उनले गाथगादी ताक्ने कसुर गरे पनि राणाहरूलाई मृत्युदण्ड नदिइने र देशनिकाला अथवा सम्पत्ति हरण पनि नगरिने कानुनी बन्दोबस्त मिलाए । यस्तैखालको लालमोहर भीमसेनले पनि गराएका भए सायद उनको पतन हुने थिएन । आफ्नो करिब ३० वर्षे अकण्टक शासन सुनिश्चित गर्नुका अतिरिक्त १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणाशासनको आधार तयार गर्न पनि जंगबहादुर सफल भए । यस हिसाबले आफू र आफ्नो परिवारको दीर्घहितबारे सोच्ने सवालमा पनि जंगबहादुर भीमसेनभन्दा अगाडि थिए ।
प्रकाशित : पुस ११, २०७७ ११:१८
तपाईं के खरिद गर्न चाहनुहुन्छ ?
हृषिकेश शाहको कमिनिस्ट नेतामोह
अग्निपन्छीको एथेन्स उडान